"Nyaata osoo hin nyaatin guyyaa sadii guuteera" - BBC News Afaan Oromoo
"Nyaata osoo hin nyaatin guyyaa sadii guuteera"
Barattootni dhalattoota Oromoo Yunivarsiitii Dabrabirhaan "Haleellan sabummaa irratti xiyyeefate nurratti raawwatamaa jira," jedhan.
Rakkoon nageenyaa yunivarsiitii Dabrabirhaanitti erga uumamee bubbulus hanga har'aatti hin tasgabboofne.
"Barattootni dhalattoota Oromoo dhirooliin gamoo tokko dubartootnis gamoo kan biraa keessatti walitti qabamnee jirra.
Nyaatas osoo hin nyaatin har'a guyyaa sadaffaa eegalleerra. Qaamni rakkoo keessaniif sababa ta'e maalidha jedhee nu gaafates hin jiru," jechuun barataan yunivarsiitichaa maqaan isaa akka hin himamne barbaadu BBCtti hime.
Barattootni madooliin heddus gamoo sana keessatti rakkachaa akka jiran barataan kun himeera. Barattuun yunivarsiitichaa isheen biraa "barattoota afaan Oromoo dubbatan qofatu miidhamaa jira. Barattootni heddus hidhamanii achi buuteen isaanii hin beekamu," jetti.
Yunivaristichaa baqatee gara Finfinnee akka dhufe kan nutti hime barataan yunivarsiitii Dabrabirhaan inni biraan, humni poolisii federaalaa lakkoofsaan muraasa ta'aniifi miseensi poolisii kora bittineessaa naannoo Amaaraa rakkinicha tasgabbeessuufi miidhaa barattoota sabaan Oromoo tahan irra gahaa jiru hambisuu akka hin dandeenye BBCtti dubbate.
"Isaan hoomaa dalaguu hin dandeenye. Osoo ijoollee rukkunna jedhanii deemanuu ni kadhatu malee tarkaanfiin fudhatan tokkoyyu hin jiru. Qabaniis seeratti hin dhiyeessine," jedha.
Rakkoon nageenya Yunivarsiitii Dabrabirhaan keessatti mul'achuu erga eegalee torbee lamaaf akka deemu kan himan barattootni BBCn haasofsiise, erga Dilbata darbee as hammaachuu isaa dubbatan.
Rakkoon kun maaliif akka uummame sababani kana jedhamu akka hin jirreefi barattootni dhalattoota Oromoo ta'an tokko tokko dhaanamuu eegaluu himu.
"Gaafa Wiixataa walitti qabamnee waan wayii walin dubbachuu qabna. Qaamni yunivarsiitii nuuf qaqqabelle hin jiru jennee barattootni naannoo Oromiyaa walitti qabamne," jedha barataan Yunivarsiitichaa.
Waajjira Poolisii lammaffaa magaala Dabrabirhaan irraa Komaandarri Itti-aanaan Zannaba Gabruu, "rakkinichi lola namoota lamaa irraa ka'ee sana boodas gara lola gareetti ce'e," jechuun BBCtti himan.
Barattootni dhalootaan Oromoo ta'an, sodaa qaban irraa kan ka'e kaleessa irraa eegalee gara mana nyaataa hin deemnu jedhan.
Haata'u malee, miidhaan hoomtuu akka irra hin geenyeef gamoon keessa jiran humnootii nageenyaan marfamee eeggamaa jira" jedhan Komaandarri itti aanaan Zannaba Gabru.
Gaafii barattootni hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekkamne jiru jedhuf "barattootni lakkoofsaan naannoo kudhan ta'an fi yeroo dhagaa darbatan qabaman gorfamanii fi yunivarsiitichaan galmaa'anii gadhiifamaniiru. Yeroo ammaa barataan hidhame hin jiru" jechuun himan.
Komaandarri Itti-aanaa Zannaba Gabruu gama isaaniitin, "qaamni alaa dhufee haleellaa raawwate goonkumaa hin jiru'' jedhan.
Barattootni kumaatamaan lakka'aman waan jiraniif qaamni seenee dhimmicha hammeessuu barbaadu jiraachuu danda'a. Wanti hanga ammaatti qabataman nuti irra geenye garuu hin jiru," jedhan.
"Qaamni sabni Amaaraafi Oromoo akka walitti bu'an kan barbaadu akka jiru nutti dhaga'ama," jechuunis komaandarichi himaniiru.